Wararka Maanta: Jimco, Mar 20, 2020-Wafdigii dowladda ee ka qeyb galay shirkii Garowe oo ka hor yimid qodobo kamida war murtiyeedkii shirka
‘Waxaan rabnaa inaan halkaan ka caddeyno inaan diidanahay ereyadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedka ku jiray ee loo geystay dowlad goboleedyada qaarkood, kuwaas oo aan qeyb ka ahayd doodihii shirka,’ ayuu yidhi wasiir Cawad.
Wasiirka arrimaha dibada wuxu sheegay inay sidoo kale diidan yihiin war murtiyeedka qeybta ku saabsan dowladda federalka oo uu tilmaamay in aysan ka turjumayn hadal jeedintii iyo doodihii shirka.
Dhinaca kale, wasiirka iyo wafdigiisa ayaa soo dhoweeyay safarka madaxweyne Deni uu ku tagayo Muqdisho iyagoo sheegay inay filayaan in lagusoo afmeero khilaafka dowladda federalka iyo maamulka Puntland.
Madaxweynaha Puntland iyo wafuuda dowladda federalka ayaa shirkii wadatashiga kadib yeeshay kulan gaar ah oo ka dhashay kadib markii masuuliyiinta dowladda ay ka xumaadeen in war murtiyeedka lagusoo daray qodobo aysan iyagu waxba kala socon sida ay sheegeen.
Maalinta berito ah ayaa la filayaa in madaxweyne Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ay Garowe iska racaan wafuuda federalka iyagoo ku wajahan magaaladda Muqdisho.